Coordinates: 50°41′24″N 3°10′54″E﻿ / ﻿50.69000°N 3.18167°E﻿ / 50.69000; 3.18167
Aqalka magaalada Roubaix
Roubaix ama Robaais waa magaalo ku taala waqooyiga wadanka Faransiiska, oo ku yaala bartamaha magaalada Lille, iyo ayaa u dhow xadka dalka Beljimka. Waxaa ku yaal waqooyi bari ee Lille, oo ku ag taala Tourcoing, Roubaix waa chef-lieu ee laba kantoon iyo magaalada saddexaad ee ugu weyn ee gobolka Faransiiska ee Hauts-de-France ay ku nool yihiin dad ku dhowaad 96 kun dadka deggan.
Waa jagada taariikhiga ah ee isku-dhafka ah ee isgaadhsiinta ee waqooyiga, kaas oo si dhaqso ah u koray qarnigii 19aad ee warshadaha tufaaxa, iyada oo inta badan muuqaalada astaamaha ah sida kuwa Ingiriisiga ah iyo kuwa Maraykanka ah. Magaaladan cusub ee cusub waxay la kulantay caqabado badan oo la xidhiidha farsamaynta sida foosha muraayadaha magaalooyinka, oo leh saamayntooda dhaqaale iyo bulsheed ee la xidhiidha, tan iyo markii shirkadaha waawayn ay hoos u dhaceen bartamihii 1970-yadii.
Wadajir ahaan magaalooyinka u dhow Lille, Tourcoing, Villeneuve-d'Ascq iyo siddeed iyo lix wadaagayaal kale ah, Roubaix wuxuu siinayaa qaab dhismeed afar magaalo oo ku yaal magaalo weyn oo ku nool dad ka badan 1.1 malyan oo qof: Metropolis Yurub ee Lille. Inta badan, Roubaix waxay ku xiran tahay isku xirnaan ballaaran oo la sameeyay magaalooyinka Beljimka ee Mouscron, Kortrijk iyo Tournai, kuwaas oo dhaley kooxdii ugu horeysay ee Yurubta ah ee Xiriirinta Territoriisha bishii Janaayo 2008, Lille-Kortrijk-Tournai oo la isku daro in ka badan 2 milyan.
↑ Af-Faransiis: [ʁubɛ]
↑ Af-Holandees: [roʊˈbeɪ]
↑ Sannadkii 2013-kii magaaladaan waxaa degan dad gaaraayo ilaa 95,866 qof.
Bar-internetka magaalada Roubaix (fr)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Roubaix&oldid=180827"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 19 Sebteembar 2018, marka ee eheed 21:17.